USAID Oo Ku Dhawaaqday Mashruuc Ay Ku Maalgelinayso Beeraha Iyo Kallumeysiga Soomaaaliya – Goobjoog News
USAID Oo Ku Dhawaaqday Mashruuc Ay Ku Maalgelinayso Beeraha Iyo Kallumeysiga Soomaaaliya
Hay’ada USAID ayaa daaha ka rogtay masharuuca kobcinta ganacsiga, dhaqaalaha, shaqaaleynta iyo hab nololeedka, mashruucan oo socon doonaa muddo 5 sano ah waxaa loo qoondeeyay adduun lacageed oo gaaraya ilaa $75 Milyan oo Doolar .
Sida uu sheegay madaxa Mashruuca Growth, Enterprise, Employment, and Livelihoods(GEEL) Maxamed cabdi nor ‘’mashruucaan waxa loogu talagay in lagu maalgeliyo ganacsatada iyadoo la siinayo tababarro iyo dhaqaale”.
Waxa uu hadaliisa sii raaciyey ‘’mashruucan waxaa uu ka kooban yahay dhowr qeybood, qeybta kowaad waa dhinaca beeraha qeybta labaadna waa kalluumeysiga ‘’
Mudane Nor wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in mashruucaan shaqo loogu abuuri doono 5,000 oo qof wuxuu intaasi raaciyay $20 Milyan oo doolar ayaan ugu talogalnay in lagu maalgeliyo ganacsatada la timaada afkaaro ganacsi .
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliyaa oo goobtaasi hadal jeedin ka sameeyay ayaa xusay’’ haddii arrintaan ay hirgasho in ay tahay guul weyn isagoo intaasi ku daray 5,000 oo dhallinyaro ah haddii shaqo loo abuuro waxa yaraneysaa shaqo la’aanta haysata dhallinyarada soomaaliya taasi oo ku xambaartay in badaha naftooda ku biimeeyaan ama ay ku biiraan kooxda nabad diidka ‘’.
Wasiirka ayaa ku dardaarmay in mashruucaan uu noqdo mid miro dhala oo uusan la mid noqon mashruucyadii hore loo bilaabay oo aan la ogeyn meel ay ku dhamaadeen .
Wasiirada kalluumeysiga ee maamulada Galmudug iyo jubaland ayaa sidoo kale si diiran u soo dhaweeyay mashruucaan .
Sidoo kale wakiil ka socday hay’ada UKAID ayaa tilmaamay in bishii May ee sanadkan ay deegaanada Putland ka bilaabeen mashruucan oo kale oo ay ugu talogaleen qarash dhan 11 Milyan oo Pound ka ingiriiska ah .
Sidoo kale wakiillo ka socday shirkadaha kalluumeysiga dalka oo madasha maalgelinta kalluumeysiga ka hadlay ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in laga caawiyo agabka kalluumeysiga sida qalabka wax lagu qaboojiyo iyo doomaha kalluumeysiga .
Si kastaba, Soomaaliya waa wadanka labaad Afrika ee leh xeebta ugu dheer hase ahaatee aan si dhab ah uga faa’iideysan kheyraadka ku jira .
Ciidamo Kala Taabacsan Mukhtaar Roobow Iyo Al-shabaab Oo Isku Horfadhiya Deegaanka Abal, Bakool
Guddoomiye Ku Xigeenkii Jalalaqsi Oo Ka Horyimid Xil Ka Qaadis Lagu Sameeyey
Waraabe: Somaliland Shaqo Kuma Laha Doorashada Soomaaliya
Erdogan: Turkiga Albaabka Kama Xiran Doono Qof Dhibaateysan
Lnffia mgggrg Viagra next day cialis super active
Kbrqpg yuiocj buy generic cialis online buy cialis
Owegkw ynsxza Buy generic viagra when does cialis go generic
Ohglft mzrrsu Buy generic viagra cialis pills
Kipuxk wnyzom Get cialis canadian online pharmacy
Onsfdn uqmkoa cvs pharmacy Wizlu
Faah faahin: Shan Qof Oo Ku Geeriyootey Gaari Lagu Rasaaseeyey Sh/dhexe
Kaydka Goobjoog Select Month November 2020 (152) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
buy sildenafil sildenafil online...
personal loans with no credit check payday loans online...
tablets [url=http://cialis20walmart.com]prelone[/url] direct...
generic viagra prices viagra pills online in india viagra 30...
can i have alcohol with viagra vialafil viagra alternative c...